Cabsi soo wajahday reer Galbeedka kadib Ruushka oo hanjabay - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Ruushka ayaa balan qaaday inuu ciidan iyo hub khatara gayn laatiin Amerika haddii Maraykanka iyo xulafadiisu qaadi waayaan hubka ay ku daladalayaan xadka Ruushka. ”Way naga go’an tahay inaan ka hortagno waxa ka socda xadkayaga ayuu yiri wasiir ku xigeenka arimaha dibedda ee Ruushka.
Reer galbeedka ayaa hub farabadan ku daldalaya Yukarayn halak ay dhinaca kale rabaan in Ruushku dib u celiyo ciidan jooga dalkiisa. Maraykanka ayaa codsaday ayaain wadahadal degdega laga yeesho arinta ay ka cabanayaan Ruushku.
”Shirka maanta ka dhacaya Iswisarlaan ayaan rabnaa inaan ku xalino arinta xadka Ruushka iyo reer galbeedka. Ruushka ayaa si cad ugu sheegay reer galbeedka inay dhigi doonaan hub halisa xadka ay la wadaagaan reer galbeedka.
Maraykanka ayaa walaac ka muujiyay in arintu faraha ka bixi karto.